करोडपति व्यापारीका ६ श्रीमती : सबैले एकैपटक शारीरिक सम्बन्धमा जोड गरेपछि त्यही कारण मृत्यु ! – Jagaran Nepal
करोडपति व्यापारीका ६ श्रीमती : सबैले एकैपटक शारीरिक सम्बन्धमा जोड गरेपछि त्यही कारण मृत्यु !
काठमाडौं । यो दुनियाँमा समय–समयमा अनेक घटनाहरु घट्छन्, जुन सहजै विश्वास गर्न लायक हुँदैनन् ।
कुनै दम्पतीले आफ्ना साथिबारे केहि गलत्त कुरा थाहा पाएर ज्यान नै लिएको वा अलग भएर बस्न थालेको कुरा सुन्नु सामान्य जस्तै हो ।
आफ्ना श्रीमान वा श्रीमतीमाथि अरु कसैले हक जमाउन खोज्दैछ भने रिस उठ्नु नौलो कुरा होईन । तर नाइजेरियामा एउटा अत्यन्तै दुर्लभ घटना बाहिर आएको छ । त्यहाँ एक करोडपति पुरुषलाई उनका ६ जना पत्नीहरु मध्ये पाँच जनाले बारम्बार बलपूर्वक सम्पर्क कायम गरेका थिए ।
त्यसको बदला लिन उनीहरुले पालैपालो आफ्नो श्रीमानसँग सम्बन्ध कायम गरेका हुन् । पाँच श्रीमतीले त्यसरी सम्पर्क राखेपछि ति पुरुषको मृत्यु भएको हो ।
करोडपति व्यापारी यूरोको ओनोजा बिनू प्रान्तमा आफ्नो छैठौं अर्थात कान्छी श्रीमतीसँग सम्बन्ध राखिरहेका थिए । नाइजेरियाको अखबार ‘डेली पोस्ट’ मा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार सोही समयमा उनका पाँच अन्य श्रीमतीले कोठामा प्रवेश गरेर आफ्नो काम शुरु गरेका हुन् ।
ती पाँच श्रीमतीले तुरुन्तै ओनोजालाई सिध्याउने चेतावनी दिएर आफुहरुसँग सम्बन्ध कायम गर्न बल गरेका थिए । ओनोजाले पाँच श्रीमतीको कुरालाई टार्न खोजे तर श्रीमतीहरूका अगाडि केहि सिप लागेन ।
कान्छी पत्नीसंग सम्बन्ध राखेका उनलाई सोही तरिकाले सम्बन्ध राख्न पाँच श्रीमतीहरुले आदेश दिएका थिए । ‘डेली पोस्ट’ ले रिपोर्ट गरेको छ कि ओनोजाको मृत्यु तब भएको थियो जब उनी श्रीमतीहरुको आदेश अनुसार पाँचौं पत्नीसँग सम्बन्ध राख्दै थिए ।
उनीहरुले क्रम कसरी मिलाएका थिए भने छैठौं पछि पाँचौं, चौंथो, तेस्रो, दोस्रा र पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने थियो । ओनोजाको छैठौं एवं कान्छी श्रीमतीका अनुसार ओनोजाको मृत्यु भएको देखेर पाँच जना श्रीमतीहरु जंगलमा भागेका थिए । केहि दिनको अन्तरमा सबैलाई पक्राउ गरेर कारागार पठाइएको हो ।